खुर्सानी टोक्दै बामदेवले भने: म ओली कै मान्छे हुँ, आजीवन उहाँकै पक्षमा लाग्ने छु! – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/खुर्सानी टोक्दै बामदेवले भने: म ओली कै मान्छे हुँ, आजीवन उहाँकै पक्षमा लाग्ने छु!
काठमाडौं। शुक्रबार बेलुकी नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको भैंसेपाटीमा पूर्व एमाले नेताहरुको डिनर मिटिङ आयोजना भयो।
समूमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल,महासचिव विष्णु पौडेल,परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली,पाँच नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल लगायतका नेताहरु सहभागि थिए। ओली र प्रचण्ड–नेपाल दुरी बढी रहेका बेला गरिएको भोजनलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ।